10 ရထားဖြင့်ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်ချစ်စရာကောင်း Castle | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ရထားဖြင့်ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်ချစ်စရာကောင်း Castle
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 12/06/2020)
သငျသညျရထားခရီးသွားနဲ့တူသလား? သငျသညျပြင်သစ်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင်အတွက်အံ့သြဖွယ်ရဲတိုက်ကိုမြင်လျှင်နဲ့တူသလား? သောအမှုဖွင့်လိုလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာရာအရပ်ကိုရောက်ရှိပါပြီ. ဆိုလိုသည်မှာဤဆောင်းပါးကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့င် “10 ရထားဖြင့်ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်ချစ်စရာကောင်း Castle” သငျသညျပြင်သစ်တွင်ဆယ်အများဆုံးချစ်စရာကောင်းရဲတိုက်၏ definition list မှငါပေးမည်. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ကျနော်တို့ရထားသူတို့ကိုရောက်ရှိရန်သင်မည်သို့ပြောပြပါ့မယ်!
1. Chenonceau ၏ Chateau
Chenonceau ၏ Chateau သူတို့ကတစ်ဦးကြိတ်၏အမြစ်ပေါ်၌တည်ဆောက်ထားအဖြစ်ထူးခြားတဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါသည် 16ကြိမ်မြောက် ရာစု. သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင် ရထားကနေတဆင့်ကရောက်ရှိ ရဲတိုက်နေတဲ့ရန်အလွန်နီးကပ်ဖြစ်သကဲ့သို့ ဘူတာရုံ. သငျသညျ Tours မှကနေမှရနိုင်, ရဲတိုက်မှကျိုးကြောင်းဆီလျော်အနီးကပ်အဓိကမြို့.
Nantes Tours မှမှရထား
လိုင်လီ Tours မှမှရထား
2. Chantilly ၏ Chateau
ထဲမှာတည်ရှိပါတယ် Chantilly Estate, သင်ကမြင်တွေ့ရပုံကိုကြည့်ပါတစ်ချိန်ကဒီရဲတိုက်အမှန်ပင်တစ်ဦးအလည်အပတ်ရကျိုးနပ်သည်. ဒါဟာ၏ဗဟိုနှင့်နီးစပ်သောင် ပဲရစ် အရာကတစ်ဦးလေပြေခရီးသွားလာစေသည်.
3. Fontainebleau ၏နန်းတော်
ဟုတ်ကဲ့, ကနည်းပညာပိုင်းဖွင့် တစ်နန်းတော်, ဒါပေမဲ့သူကိုဂရုစိုကျတယျ, ကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာင်! သူတို့ကတညျဆောကျ Fontainebleau ပြန်အတွက် 12ကြိမ်မြောက် ရာစု, ထိုသို့နေဆဲအထင်ကြီးကြည့်နှင့်ကောင်းစွာထားရှိမည်. ဒါဟာအစဖွင့် သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူ. သငျသညျ Transilien လိုင်း R ကိုအတူတစ်နာရီထက်လျော့နည်းအတွက်ပဲရစ်ကနေရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်.
4. Chateau က de Breteuil
သင်ကအတွင်းဒီအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ရဲတိုက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် အမျိုးသားရေးကိုသဘာဝပန်းခြံ ကြောင်းပဲရစ်အပြင်ဘက်မှာပါပဲ. သို့သျောလညျး, ကတိုက်ရိုက်တတ်ကြောင်းတစ်ခုသာလွန်းလည်းမရှိအဖြစ်မီးရထားဖွငျ့ဤလှပသောရဲတိုက်တစ်ခုသွားရောက်လည်ပတ်နည်းနည်းလှည်ဖြစ်ပါသည်. အနည်းဆုံးသင်ဆဲတစ်ဦးကိုခံစားနိုင်ပါတယ် ရထားစီးနင်း ပဲရစ်!
Chambord Castle လာရောက်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်မယ့်တစ်ဦးကိုအမှန်တကယ်စိတ်ကိုဖမ်းစားခြင်းနှင့်ခံ့ညားရဲတိုက်ဖြစ်ပါတယ်. အဲဒါကိုရဖို့, သငျသညျ Blois မြို့ကနေတက္ကစီသို့မဟုတ်လွန်းလိုပါလိမ့်မယ်. သို့သျောလညျး, Blois ရောက်ရှိပြင်သစ်တွင်အများအပြားမြို့မြို့တို့မှလက်လှမ်းဖြစ်ပါသည်. သငျသညျပဲရစ်ကနေခရီးသွားလာတဲ့အခါမှာတစ်နာရီနှင့်တစ်နှစ်ခွဲထက်လျော့နည်းထဲမှာမှရနိုင်.
၏ရဲတိုက် Amboise ပြင်သစ်တွင်အများဆုံးချစ်စရာကောင်းရဲတိုက်တို့တွင်. ဒါဟာ Renaissance ကနေဗိသုကာတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ရတနာင်. သင်တစ်ဦးကနေတဆင့်ပြင်သစ်တွင်အများအပြားမြို့မြို့တို့မှရထားအလွယ်တကူ Chateau ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် TGV သို့မဟုတ်အချင်းချင်း ရထား.
7. ကျော်ကြားသောရဲတိုက် Chateau de Monte-Cristo
ကျနော်တို့အလွန်အမင်းဒီချစ်စရာအကြံပြု, နာမည်ကျော် Alexandre Dumas အဖြစ်သေးငယ်တဲ့ရဲတိုက်က built! သင့်အနေဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် Monte Cristo Castle အလွယ်တကူဒေသခံတစ်ဦးရထားလိုင်းကိုအတူကပဲရစ်၌တရားရဲ့အဖြစ်! စိတျထဲတှငျကြောင်းနှင့်အတူ, သငျသညျအခြို့သောအခြားအရာအရပျကနေလာမယ့်အနေလျှင်သင်မည်သည့်မီးရထားယူနိုင်ပါသည်.
8. အံ့သြဖွယ် Castle Chateau d'Azay-le-Rideau
ဒါဟာညာဘက်ငယ်လေးတစ်အိုင်အတွင်းကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်မယ့်စစ်မှန်စွာခမ်းနားသေးငယ်တဲ့ရဲတိုက်ဖြစ်ပါတယ်! ဒီထက်မဆို prettier မရနိုငျ. သငျသညျ Tours မှမြို့ကနေနာရီဝက်ရထားစီးယူခြင်းအားဖြင့်အလွယ်တကူရဲတိုက်မှရနိုင်. ထိုအခါသင်သည်သာအရဲတိုက်မှ 20 မိနစ်လမ်းလျှောက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်.
ဒါဟာပြင်သစ်တွင်အများဆုံးချစ်စရာကောင်းရဲတိုက်အကြားမဖြစ်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကပါဝင်သည်ခဲ့. အဆိုပါရဲတိုက်ဖြစ်ပါတယ် သမိုင်း၌ငွေရတတ်သော, ထိုသို့အမှန်တကယ်ဖွင့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ, ယင်း၏ချစ်စရာကောင်းလမ်းထဲမှာမသာ! ရဲတိုက်မှအနီးဆုံးရထားဘူတာ Selestat ၌တည်ရှိ၏, သင်အနေဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် Strasbourg အနီးအနားသို့မဟုတ်အခြားမြို့ကြီးများ.
အဆိုပါ Chateau de Pierrefonds ခြောပြင်သစ်တွင်အများဆုံးချစ်စရာကောင်းရဲတိုက်အကြောင်းကိုစာရင်းတစ်ခုအပေါ်ဖြစ်ခြင်း၏အရှိဆုံးထိုက်တန်. သင်သာတစ်ဦးရထားယူပြီးအားဖြင့်ရဲတိုက်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် Compiegne, ထို့နောက်တစ်ဦးကိုယူပြီး ဘတ်စ်ကား Pierrefonds မှ.
သငျသညျမီးရထားခရီးသွားလာအပေါ်ပိုပြီးအချက်အလက်လိုအပ်ခဲ့လျှင် 10 ရထားဖြင့်ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်ချစ်စရာကောင်း Castle, သင်လုပ်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ site မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-castles-france%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ရဲတိုက် europetravel ခရီးသွား travelfrance